ဘာစီလိုနာက မကျဆီကို တကယျ မလိုခငျြတော့ဘူးလား ? ? – Myan Ball
ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ အသငျးကနထှေကျဖို့ တောငျးဆိုမှုပွုလုပျခဲ့တဲ့ မကျဆီကို ဘာစီလိုနာအသငျးတာဝနျရှိ သူတှကေ ထှကျခှာခှငျ့မပေးခဲ့ဘဲ စာခြုပျပါလြျောကွေးနဲ့ ထိနျးခြုပျဖို့ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ မနျစီးတီးအသငျးက စာခြုပျပါ လြျောကွေးပေးပွီး ချေါယူမယျလို့ လုပျဆောငျလာတဲ့အခြိနျကမြှ အကွောငျးပွခကျြမြိုးစုံနဲ့ မကျဆီကို ဆကျထိနျးထားဖို့ လုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ စာခြုပျသကျတမျး တဈနှဈသာကနျြတော့တဲ့ မကျဆီကို စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့ မလုပျဆောငျတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
စာခြုပျသကျတမျးတဈနှဈသာကနျြတော့တဲ့ မကျဆီက အသငျးပရိသတျတှရေဲ့ အမုနျးကိုမလိုခငျြသလို ကိုယျတိုငျကလညျး ဘာစီလိုနာမှာ ဆကျကစားခငျြတဲ့စိတျရှိတာကွောငျ့ အသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးပေးဆပျကစားနပေမေယျ့ ဘာစီလိုနာ တာဝနျရှိသူတှဘေကျကတော့ မကျဆီမရှိလညျး ဘာစီလိုနာအသငျး ဆကျရှိနတေယျဆိုတဲ့ သဘောထားမြိုးတှပွေုလုပျ လာတာကွောငျ့ မကျဆီရဲ့အပွောငျးအရှပေုံ့ပွငျဟာ ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျမဖှငျ့ခငျမှာ ပွနျလညျလှုပျခတျလာ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ ပွဿနာတှမြေားစှာနဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ရတဲ့ ဘာစီလိုနာဟာ ဥက်ကဌ ဘာတိုမီယူနဲ့အဖှဲ့နုတျထှကျသှားတာကွောငျ့ ကွားဖွတျ ဥက်ကဌသဈရှေးကောကျပှဲလညျး ပွုလုပျခဲ့ရပါတယျ။ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲမှာ အနိုငျရပွီး ယာယီဥက်ကဌဖွဈလ တဲ့ ကားလကျဈ တကျဈကှကျဈက အသငျးမှာ မပြျောတော့တဲ့ မကျဆီကို တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ နှရောသီမှာ ရောငျးခခြဲ့ သငျ့တယျလို့ ပွောခဲ့တာကွောငျ့ ဘာစီလိုနာတာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ မကျဆီကို တကယျမလိုခငျြတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ မေး ခှနျးတှေ ထှကျပျေါလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာက မက်ဆီကို တကယ် မလိုချင်တော့ဘူးလား ? ?
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းကနေထွက်ဖို့ တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီကို ဘာစီလိုနာအသင်းတာဝန်ရှိ သူတွေက ထွက်ခွာခွင့်မပေးခဲ့ဘဲ စာချုပ်ပါလျော်ကြေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းက စာချုပ်ပါ လျော်ကြေးပေးပြီး ခေါ်ယူမယ်လို့ လုပ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ကျမှ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ မက်ဆီကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် စာချုပ်သက်တမ်း တစ်နှစ်သာကျန်တော့တဲ့ မက်ဆီကို စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ မလုပ်ဆောင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်သာကျန်တော့တဲ့ မက်ဆီက အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့ အမုန်းကိုမလိုချင်သလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာစီလိုနာမှာ ဆက်ကစားချင်တဲ့စိတ်ရှိတာကြောင့် အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ကစားနေပေမယ့် ဘာစီလိုနာ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ မက်ဆီမရှိလည်း ဘာစီလိုနာအသင်း ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးတွေပြုလုပ် လာတာကြောင့် မက်ဆီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင်ဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မဖွင့်ခင်မှာ ပြန်လည်လှုပ်ခတ်လာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ ပြဿနာတွေများစွာနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဘာစီလိုနာဟာ ဥက္ကဌ ဘာတိုမီယူနဲ့အဖွဲ့နုတ်ထွက်သွားတာကြောင့် ကြားဖြတ် ဥက္ကဌသစ်ရွေးကောက်ပွဲလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီး ယာယီဥက္ကဌဖြစ်လ တဲ့ ကားလက်စ် တက်စ်ကွက်စ်က အသင်းမှာ မပျော်တော့တဲ့ မက်ဆီကို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ နွေရာသီမှာ ရောင်းချခဲ့ သင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ မက်ဆီကို တကယ်မလိုချင်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့ မေး ခွန်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယျ့ရာသီမှာ မကျဆီနဲ့ အတူတူ တှဲပွီး ပွနျကစားခငျြပါတယျလို့ ပွောခဲ့တဲ့ ပီအကျဈဂြီတိုကျစဈမှူး နမော